appFigures: Ukunika ingxelo yaBaphuhlisi beApple | Martech Zone
appFigures: Ukunika ingxelo yaBaphuhlisi boSetyenziso lweSoftware
NgoLwesibini, Januwari 7, 2014 NgoLwesibini, Januwari 7, 2014 Douglas Karr
appFigures liqonga elifikelelekayo lokunika ingxelo kubaphuhlisi bohlelo lokusebenza lweselfowuni elizisa yonke intengiso yeapps yakho, idatha yentengiso, uphononongo lwehlabathi kunye nokuhlaziywa kwinqanaba leyure. appFigures iqokelela kwaye ibone ukuthengisa nokukhuphela amanani, uphononongo kwihlabathi liphela kunye nenqanaba, kunye nenye idatha isisombululo sabo sokunika ingxelo.
Qhagamshela iiVenkile ezininzi -Umkhondo kunye nokuthelekisa ii -apps ze-iOS, iMac kunye nee-Android kwindawo enye.
Iingxelo zemihla ngemihla ze-imeyile - ngamanani abalulekileyo, kubandakanya idatha yokuthengisa, ukhuphelo, ingeniso yentengiso, kunye nenqanaba elitsha.
Usetyenziso lweSicelo -Ukulandela umkhondo kwinqanaba ngalinye losetyenziso lwakho, uzitshati zonke kudidi ngalunye. Izikhundla zitsaliwe kuzo zonke iivenkile zeapps kwihlabathi liphela ngohlaziyo lweyure.
Ukunika ingxelo kunye nokuBoniswa Cacisa ukuthengisa kwakho usetyenziso, ukhuphelo, kunye nohlaziyo usebenzisa izixhobo ezisebenzisanayo. Hlalutya intengiso ngomhla, ngelizwe, nangommandla konke kwiphepha elinye.
I-API yonjiniyela -Ukufikelela ngokocwangco kuyo yonke idatha yeapp yakho ngeREST API kwaye wandise okanye wenze izicelo.
Ukungenisa idatha ngokuzenzekelayo -Ngenisa idatha yakho ngokuthe ngqo kwivenkile.
Landa umkhondo weNtengiso ecaleni kweNtengiso -Ukulandela umkhondo wengeniso ye-iAd kunye neAdMob kunye nokusebenza kanye ecaleni kwentengiso yeapp, ukusuka kwiakhawunti enye yeAppigig. Bona ukuvela, ucofa, kunye nangaphezulu ngelizwe, umhla, okanye usetyenziso.
Uphengululo oluguqulweyo -Funda ukuba bathini abasebenzisi malunga neeapps zakho ngalo lonke uphononongo kunye nokuhlelwa okuguqulelwe kulwimi lwakho.
Sebenzisana ngokulula -Kwabelana ngokukhuselekileyo ngedatha yakho kunye naye nabani na kwaye unqande ukuba yeyiphi idatha oza kuyenza ifumaneke nokuba iza kuhlala ixesha elingakanani.
tags: Usetyenziso lwe-amazoniiapps zeAmazonesweni appUsetyenziso lwe-appusetyenziso lwengxelousetyenziso lwevenkileappigigureesitolo se apulaUsetyenziso lwe-droidgoogleUsetyenziso lwe-iosiiapps
Izono ezisixhenxe eziBulalayo zeNtengiso ye-SMS